Amaqhinga okuthengisa e-B2B ka-2013 nangaphaya kwa | Martech Zone
Xa sithetha neenkampani ezinceda abathengi, zihlala zibuza ukuba sisebenze naziphi na iinkampani zeB2C. Xa sithetha neenkampani ze-B2B, bayabuza ukuba sisebenze neenkampani ze-B2B. Kukho konke ukunyaniseka, amacebo ayafana kakhulu… ngamanani nenkqubo yokuthenga eyahlukileyo. Nangona kunjalo, siyawubona umohluko kwinzuzo yokuthenga. Iinkampani ze-B2C zihlala zithembele kwicala levolthi ephezulu kakhulu kunye nengeniso ephantsi ngentengo nganye-ngenxa yoko ibango elikhulu liyimfuneko. Kwi-B2B, ukubandakanyeka kubiza kakhulu ngexabiso eliphantsi, amanani afanelekileyo abalulekile.
Ndothukile kukuba abathengisi abaninzi be-B2B bayazibuza ukuba ingaba ukuthengisa kwi-Intanethi kuya kubanceda ngokwenene. Ndikhumbula ukujoyina iiforamu ezikwi-Intanethi kwiminyaka engama-20 eyadlulayo bendisebenzisa i-Intanethi ukufumana iinzwa ezikufutshane kwimigca yemveliso ebinovelwano olungcono kunye nesithuba esibanzi kunenkqubo yethu yezothutho eyayisebenzisa kwiPhephandaba. Kuthathe iiveki ezimbalwa, kodwa ndiyifumene into ebendiyifuna kwaye sagcina amashumi amawaka eedola ngonyaka xa bekungafuneki ukuba sithathe indawo yezivamvo ezaphukileyo. Yayiyi-B2B leyo. Kwi-Intanethi.
Ngoku, kuthatha uphando olulula kuGoogle kwaye ndingafumana ngaphezulu kwe-1,500 yabenzi boluvo, iinkcukacha zabo, uphononongo lweenkampani ezithengisayo, kunye neevidiyo zendlela yokuzisebenzisa kunye nalapho ungazithenga khona. Umxholo weB2B lowo. Kuyo yonke indawo. Amashishini ahlala egcina imali eninzi xa esenza isigqibo sokuthenga kunye namagosa okuthengwa kwempahla kunye neenkokheli zoshishino abahlali kwaye balinde umthengisi ukuba ababize ngaphambi kokuba benze isigqibo. Rhoqo, isigqibo senziwa lixesha Ithemba likubiza!
GetAmbassadorInkqubo yokuphela yohlobo lokugqibela lokuthumela amashishini, iphuhlise le infographic kwizicwangciso zeNtengiso ye-Intanethi kwi-B2B ukusuka kwidatha abayifumene BtoBOnline kwaye TopRankBlog.
tags: b2bUmxholo we-b2bUkuthengisa umxholo we-b2bUkuthengisa kwe-b2b